I-Cool Trivia malunga neComputer Elements
I- element element yamachiza yindlela yemeko engenakuphulwa kwiinqununu ezincinci nangayiphi na into eyenziwa ngamakhemikhali. Okubalulekileyo, oku kuthetha ukuba izakhi zifana neebhloko zakhiwo ezazisetyenziselwa ukwakha umba. Nazi ezinye iindawo ezipholileyo zokuzibonakalisa malunga namaqela.
Isampuli yento ecocekileyo iqukethe uhlobo olulodwa lwe-athomu, oku kuthetha ukuba i-athomu nganye iqulethe inani elifanayo leprotoni njengalo lonke elinye i-athomu kwi-specimen. Inani lee-electron kwi-athomu nganye liyakwazi ukuhluka (ions ezahlukeneyo), njengokuba unako inani leetyutron (i-isotop ehlukeneyo).
Okwangoku, zonke izinto ezikwithebhile yexesha eliye zafunyanwa okanye zenziwe kwibhile. Kukho izinto ezili-118 ezaziwa. Ukuba enye inxalenye, i-atomic number (ngaphezulu kweeponononi) ifunyenwe, omnye umgca uya kudibaniswa kwitheyibhile lexesha.
Iisampuli ezimbini zezinto ezifanayo zibonakala zihluke ngokupheleleyo kwaye zibonisa iimpawu ezihlukeneyo zeekhemikhali kunye neziphathekayo. Oku kubangelwa ukuba i-atom yesalathisi inokudibanisa kwaye ifake ngeendlela ezininzi, ukwakha okubizwa ngokuba yi-allotropes yento. Imizekelo emibini ye-allotropes yekhabhoni yidayim kunye negraphite.
Into ebaluleke kunayo yonke , ngokwemisenti nganye nge-athomu, iyisigaba 118. Nangona kunjalo, into ebaluleke ngaphezu kokuxininisa i-osmium (i-22.61 g / cm 3 ) okanye i-iridium (i-22.65 g / cm 3 ). Ngaphantsi kweemeko zokulinga, i-osmium isoloko ilukhuni ngakumbi kune-iridium, kodwa ixabiso liye lisondele kwaye lixhomekeka kwizinto ezininzi, akwenzeki nto. Bobabini i-osmium kunye ne-iridium ziphindwe kabini kunzima kunokuba zikhokele!
Iyona nto ininzi kwindalo yendalo i-hydrogen, eqikelelwa malunga ne-3/4 yezinto eziqhelekileyo zenzululwazi ziye zaphawula. Into ebaluleke kakhulu emzimbeni womntu i-oksijeni, ngokwebuninzi, okanye i-hydrogen, ngokwemimiselo ye-athomu yesalathisi esele iphezulu.
Into ebaluleke kakhulu ye-electronegative i-fluorine. Oku kuthetha ukuba i-fluorine ibhetele ekutsaleni i-elektronta ukuba yenze umxube weekhemikhali, ngoko ivelisa ngokukhawuleza kwaye ithatha inxaxheba kwimichiza. Kwiphepha eliphambene nesilinganiselo yinto ephezulu kakhulu yombane, yinto enye enegunya lokuthobeka. Le yintsika ye-francium, engakhange ithande ama-electron ahlangeneyo. Njengomkhuhlane, loo nto iyasebenza kakhulu, kwakhona, ngenxa yokuba amaninzi afakwa phakathi kwama-athomu anemilinganiselo eyahlukeneyo ye-electronegativity values.
Kunzima ukubiza igama elibi kakhulu kuba nayiphi na into ephuma kwi-francium kunye ne-atomic inombolo ephezulu (i-transuranium elements) ihlawule ngokukhawuleza ayikwazi ukuqokelelwa ukuba ithengiswe. Ezi zinto zingabizi ukuba zibiza kakhulu ngenxa yokuba ziveliswa kwi-laboratory yuclear okanye i-reactor. Into ephezulu kakhulu yendalo ongayithengayo mhlawumbi ibe yi-lutetium, eyakukuqhubela i-$ 10,000 nge-100 gram.
Into ehamba phambili yona nto ikwazi ukutshintshisa ubushushu kunye nombane. Uninzi lwezinyithi zihamba phambili. Eyona nto iyona isiliva, ilandelwa ngethusi kunye negolide.
Iyona nto inomsocovayo yinto ekhupha amandla amaninzi kunye neengqungquthela ngokubola kwe-radioactive. Kunzima ukukhetha into enye, kuba zonke iziganeko eziphezulu kuneenombolo ze-athomu 84 zizinzile. I-radioactivity ephezulu elinganiselwe ivela kwi-polonium yesixhobo. I-milligram enye ye-polonium ikhupha iindidi ze-alpha ezinjenge-5 gram ye-radium, enye into evelele kakhulu.
Isalathisi esona sininzi sisona sibonisa iimpawu zesitye kwizinga eliphezulu. Ezi ziquka ukukwazi ukunciphisa ekwenzeni imichiza, amandla okwenza i-chloride kunye ne-oxide, kunye nokukwazi ukuchithwa kwe-hydrogen ekudambiseni i-acids. I-Francium iyona nto iyona nto iyona nto insimbi, kodwa kuba kukho iibhile ezimbalwa kuphela kuMhlaba nanini na ixesha, i-cesium iyafanelwa isihloko.
UbuGcisa bobugcisa - iminyaka eyi-100 000 yeNkcazo yokuLungisa
Fumana idilesi ye-IP yomsebenzisi kunye ne-PHP Script
Ngaba ukuphakama kweLwesine nguMhla Oyingcwele Wokunyanzeliswa?